Ikhala noma i-Rectal? Isivivinyo esisha se-Anal COVID sabahambi
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Ikhala noma i-Rectal? Isivivinyo esisha se-Anal COVID sabahambi
Airlines • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • I-China Breaking News • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Izindaba Ezihlukahlukene
Amazwe amaningi adinga ukuhlolwa kwe-COVID lapho efika. Kuze kube manje bekusho i-swab emakhaleni akho. Uhlobo olusha olunembe kakhudlwana ukufaka le swab ku-anus yakho. Ngabe lokhu kuhlukumezeka kukahulumeni noma indlela entsha yokugcina i-COVID-19 ingaphandle nabahambi baphephile?
Isivivinyo se-COVID saziwa njenge-swab obeka ikhala lakho, umlomo, noma ingquza
I-China yizwe lokuqala elidinga izivivinyo zokufika kwe-COVID ezimpundu
Isivivinyo se-Anus / Anal COVID: Umkhuba omusha womhlaba oqhubekela phambili?
Isivivinyo sesilonda se-COVID sinembe kakhudlwana kunamakhala omlomo noma omlomo.
I-China ayizange ibike ngecala elisha lendawo le-COVID-19 esikhathini esingaphezu kwesonto, kodwa igcine ukuhlolwa okuqinile, ikakhulukazi kubantu abafika bevela kwamanye amazwe afana ne-United States.
Kungani osomaqhinga nabanye abantu bakwamanye amazwe abanesimo esikhethekile bekhululiwe ekutholeni isivivinyo se-anal COVID?
IWashington Post ibike ngesonto eledlule ukuthi izisebenzi ezithile zamanxusa aseMelika zitshele uMnyango Wezombuso wase-US ukuthi zahlolwa izivivinyo zangasese ngesikhathi zifika eChina.
IChina iyakuphika lokhu, ithi amanxusa angaphandle anezikhundla ezikhethekile. Umbuzo uhlala uma lesi simo esikhethekile sisho ukusongelwa okuncane kwe-COVID. Indlela ethokozisayo.
Odokotela baseChina bathi isayensi ikhona. Ukutholwa kweziguli, bathi, kuqhubekile nokuhlola ukuthi kunesifo ngamasampula avela ezinsukwini ezimbalwa zomgudu wokugaya ukudla ngemuva kokubuya kwamakhala namakhala emqaleni.
Kodwa kwabaningi, bekubonakala kuyisinyathelo esiseqophelweni eliphezulu ukungena kukahulumeni ngemuva konyaka nokubalwa kwesifo esiqeda isithunzi.
Uhulumeni waseChina ukhiphe i-anal swab ekuhlolweni kwe-COVID-19.
Ngemuva kwesikhathi eside lapho isiguli se-COVID-19 sihlola imiphumela engemihle yesikhala kanye nomlomo swabs, imiphumela yangaphambilini isengalandelela igciwane.
Ucwaningo olunesihloko 'I-swabs ebonakalayo yokuxilongwa kwe-COVID-19' eshicilelwe ngo-Ephreli 2020 ephephabhukwini le-BMJ, iphakamisa ukuthi ngenkathi ukuhlolwa komlomo noma kwekhala kungaveza imiphumela emibi, i-rectal swab esigulini esifanayo ingakhombisa imikhondo ye-COVID-19.
Idatha futhi iphakamisa ukuthi ezinye iziguli zihlola ukutholakala kuma-rectal swabs ezinsukwini zokuqala zokuqala kwe-COVID-19.
Lokhu kungachaza ukuthi kungani uhulumeni waseChina ethanda i-anal swab uma iqhathaniswa nekhala noma umlomo.
Ucwaningo lushicilelwe ku I-Pubmed.gov iphakamisa ukuthi igciwane le-COVID-19 lichithwa ngohlelo lokugaya amathumbu ngendle.
Ungqongqoshe Wezokuvakasha e-Jamaica Uthumele Uzwela Emndenini...